घुस लिएको भन्दै पत्रकार साहले पक्राउ गराएका पाण्डे विना सर्त रिहा, पर्सा प्रहरी भन्छन् तिनै पत्रकारलाई सोध्नुस किन जाहेरी दिनुभएन् ! :: बलिराम यादव :: घुस लिएको भन्दै पत्रकार साहले पक्राउ गराएका पाण्डे विना सर्त रिहा, पर्सा प्रहरी भन्छन् तिनै पत्रकारलाई सोध्नुस किन जाहेरी दिनुभएन् !
वीरगंजका एक बिचौलियाले घुस लिदै गर्दा भन्दै प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको दिनेश पाण्डे भनिने उमा पाण्डेलाई पर्सा प्रहरीले विना शर्त रिहा गरेको छ । एक लाख २५ हजार घुसको रकमसहित रंगे हात पक्राउ परेको भन्दै पत्रकार ध्रुव साहले हिजो पाण्डेलाई प्रहरीको जिम्मामा लगाएका थिए ।
२४ घण्टा नबित्दै पर्सा प्रहरीले वीरगंज १३ मुर्ली निवासी ६० बर्षिय पाण्डेलाई रिहा गरेको छ ।
वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर १५ लक्ष्मणवा निवासी राजनारायण झाले नयाँ नापीको लालपुर्जाका लागी दिनहु नापी कार्यालय धाउदा पनि लालपुर्जा पाएका छैनन् । कर्मचारीको ड्रेसमा रहेका पाण्डेले १ लाख २५ हजार रकम दिए दिलाईदिने भन्दै झासंग माग गरेको बुझिएको छ । सोहि रकम लिन एभरेष्ट बैक पुगेका ति बिचौलियालाई पत्रकार ध्रव साहले प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए ।
पाण्डेलाई किन रिहा गरिएको बारे पर्साका प्रहरी नायब उपरिक्षक तथा प्रवक्ता ओम प्रकाश खनालले सुरुवातमा छुटेको हैन, मेडिकलका लागी राखिएको भनेर प्रतिक्रिया दिए । त्यसपछि कुन अस्पतालमा पठाइएको भनेर बुझ्दा लग्तै उनले परिवारको जिम्मामा लगाइएको बताए । र भने, थप बुझनु परे ध्रुव साहलाई सोध्नुस न । घुस लिएको वा भ्रष्टाचारी सम्बन्धी कुनै निवेदन नआएकाले पाण्डेलाई रिहा गरिएको हो । हामीले लिएर त आयौँ तर पत्रकार साहले जाहेरी नदिदाँ हामीले परिवारको जिम्मामा छोडेका छौँ ।
वृद्ध हुनुहुन्छ, भोलि केहि भयो भने कसले जिम्मा लिने भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ८, २०७९ २१:१६